DEG DEG:- Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Sigmar Gabriel ayaa booqasho aan hore loo sii shaacinin daqiiqado kahor ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Diyaarad ay saaran yihiin wafdiga uu hoggaaminaayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Sigmar Gabriel ayaa goordhaw kasoo degatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wafdigaan ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde kusoo dhaweeyay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo mas’uuliyiin kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibaddda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa haatan garoonka Muqdisho kulan ku qaadanaya wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Sigmar Gabriel, waxaana kulankaasi ra’iisul wasaaraha ku welinaayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in ra’iisul wasaare Kheyre iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Sigmar Gabriel ay si wadajir ah ula hadlaan saxaafadda.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay oo magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi sare oo ka socda dalka Jarmalka, waxayna booqashadooda kusoo beegmaysaa xilli dhawaan la filaayo in magaalada London lagu qabto shir looga hadlaayo arrimaha dalka Soomaaliya.